Mon Petit Avatar: Songzanlin Monastery, Shangri-La
It was suchagreat morning as I hadachance to eat my favorite food, well,anoodle soup with fried dough (in picture) and coffee. I couldn’t ask for more food after suchabig breakfast, which I still miss by the way, fromashop near the inn we were staying at Shangri-la (Yunnan province). Our little jaunt started just after our stylish guide came to pick us up at the breakfast joint. Actually, I didn’t expect to see the mountain top village to be that beautiful. If you ever happen to be in Shangri-la in Yunnan province, 300 years old Songzanlin Monastery, situated in the high altitude region over 3,300 meters, isamust-see sight. I would say the best time to visit there is either spring or summer: we went there in one rainy season and it was very cold, wet, and thus very difficult to take pictures, lol!!!
Posted by Mon Petit Avatar at 10:32 PM
Labels: China, Self, Trip
ယူနန်ကိုရောက်ဖူးတယ် ဆိုရုံဘဲရောက်ဘူးတယ်။ ဒီနေရာကို ရောက်ဖူးချင်နေတာ။ တီဗီမှာ အဲဒီကဈေးတန်းမှာရောင်းတဲ့ အစားအသောက်တွေပြတော့သိပ်သဘောကျလို့ မြေအိုးမြီးရှည်လိုဟာမျိုးတွေတောင်လိုက်လုပ်စားလိုက်သေးတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေတင်ပေးတာပျော်လုိုက်တား)))
မြို့လေးကြည့်ရတာ အေးချမ်းလိုက်တာ၊ ရောက်ဖူးချင်တဲ့ နေရာတွေက များနေတယ်....။ အီကြာကွေးလည်း ရသား....:))
မိုးတွင်းကြီးမှာ ခရီးလျှောက်သွားနိုင်တာ ကောင်းပါ့...။
ခရီးလမ်းမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေမွန်...။ အီကြာကွေးတော့ကြိုက်တယ်..။
မြို့ကလေးက မြူခိုးတွေနဲ့ လှလိုက်တာ..၊ ဂိုက်ရဲ့ စတိုင်လ်က မိုက်တယ်၊ မိုက်ခရိုဖုန်း နေရာမှာ ခြောက်လုံးပြူးသာ ထည့်လိုက်ရင်တော့ ကလင့်တ်အိစ်ဝုဒ် နဲ့ နင်လားငါလားပဲ.....။း)
အို... ရှန်ဂရီလာကို သွားဖို့ စိတ်ကူးနေတုန်း သူကရောက်သွားပြီ။ သိပ်မကြာခင် သွားဖို့စဉ်းစားနေတာ . သိပ်လှပြီးအေးချမ်းတဲ့ မြို့ကလေးဘဲနော်။
ဒီလိုပုံတွေ မြင်ရတော မဖြစ်ဖြစ်အောင်သွားဖို့ သေချာနေပြီး)
တို့လဲထပ်သွားချင်တာနဲ့ ပုံတွေကြည့်ရင်းတင်ဖြစ်တာ Ioraရေ။
အီကြာကွေးကိုအဲလိုမြင်တော့ ပျော်သွားတာကို မှတ်မိသေးတယ် မမချစ်ကြည်အေး။
တို့တွေ ရန်ကုန်ရောက်တယ် မီးပြတ်တချက် လာတချက် မိုးကလဲနေ့တိုင်းရွာနဲ့ စိတ်ကိုညစ်ရော မိုးငွေ့လေး။
Guide ပြောတာတလုံးမှနားမလည်တာကို သတိရမိသေးတယ် ကိုညီလင်းသစ်။
သွားဖြစ်အောင်သွားဖို့ ပြောပါရစေချော၊ စကားမစပ် ချောရဲ့ Blog ဝင်ကြည့်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။